Isikhathi sokufunda: 4 amaminithi(Kugcine ukubuyekezwa On: 20/02/2020)
Europapark kuyinto kwepaki kunawo futhi ethandwa kakhulu kulo lonke elaseYurophu, ngakwesokudla ngemva Disneyland. Nokho, ukuthi akusiwona kungani sikhetha ke. Kuyinto omunye the best amapaki ezokuzijabulisa eYurophu ngokombono wethu ngenxa roller-coasters. Uzothola ukugibela ngakho amaningi futhi eziningi yibo eyingqayizivele ngempela. Uzoba ukuhlola Arthur – entsha roller-coaster lokho inhlanganisela i / eyodwa zasendlini ongaphandle nge ride amnyama kanye!
Ungathola le timu emangalisayo epaki in Rust, close edolobheni ukuze Freiburg futhi Strasbourg. Lokho kusho ukuthi ungakwazi ukufinyelela Europapark sasivumela kalula ngesitimela, kusukela kunoma iyiphi idolobha. I esiteshini sesitimela ezinye 4km kude ukuze ukwazi ke ukuhamba emnyango, noma uthathe omunye njalo amabhasi ukuthi ukuya epaki.
Sekukonke, laba abathathu bamunye ngamapiki zethu phezulu. Kukhona nabanye abaningi eYurophu, lokho ezithile, but we feel that only these three are indeed the best. Ungakwazi Xhumana nathi uma ufuna ukwazi kabanzi mayelana amapaki kanye ugibele isitimela kubo. Futhi, ukhululeke sibheke ibhulogi yethu. Thina ngokuvamile bebhala ezindaweni eziningi futhi isitimela ugibele kuwufanele ngokuvakashela nokuthatha yonke eYurophu!
Ingabe ufuna ukushumeka kokuthunyelwe kwebhulogi ungene kusayithi lakho, ungakwazi noma ukuthatha izithombe zethu futhi umbhalo kanye nje ukusinika credit enesixhumanisi lokhu post blog, noma chofoza lapha: https://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/best-amusement-parks-europe/- (Skrolela phansi kancane ukubona Shumeka Ikhodi)
#AmusementParks #efteling #PortAventura #traveleurope i-eurotrip amathiphu isitimela sokuvakasha Izikhangibavakashi